Samy nitondra olona 32 avy ilay sprinter raha 15 avy kosa no tao anatin’ilay Toyota. Nisandoka ho mpitatitra mpiasa ny mpamilin’ireto fiara ireto ka nametrahana takelaka sandoka misy soratra « transport personnel » sy soratra « laisser passer ». Mpiasa amina orinasa tsy miankina eny Ivato no nolazain’izy ireo fa ateriny sy alainy amin’izany. Rehefa natao anefa ny fanadihadiana dia hita fa tsy ara-dalàna ireo taratasy ary nentina hisandohana sy hamitahana ny mpitandro ny filaminana izany mba tsy hanakanana azy ireo. Nandray fanapahan-kevitra ny hanasazy ireo mpamily sy ny mpamily mpanampy azy avy hatrany ny zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-paritr’ Ambohidratrimo ka nosamborina ary nampidirina « violon » nandritra ny 48 ora ireto farany. Nampidirina ambalam-pamonjana kosa ireo fiara.